မယားပါ ညီမလေး(အပြာစာပေ) – Grab Love Story
by phyu June 18, 2021
ကျွန်‌‌တော်‌တို့က ဖအေတူအမေကွဲ ‌မောင်‌နှမနှစ်‌‌ယောက်‌တည်းပဲရှိတာပါ… ငယ်ငယ်ထဲကယူထားတယ်ဆိုတော့ အမေအရင်းလို့ပဲ အမေလို့ခေါ်ပါတယ် ညီမနဲ့က သုံးနှစ်‌ကွာပါတယ်‌…ကျ‌နော်‌က ၉တန်း‌လောက်‌မှ ဂွင်းစထုဖူးတာ…
ကျ‌နော်‌၁၀တန်း‌အောင်‌‌တော့ ညီမ‌လေးက ၈တန်း အဲ့အချိန်‌မှာပဲ ညီမနဲ့စဖြစ်‌တာပါ။ ၁၀တန်း‌အောင်‌ပြီး ‌ကျောင်းကမတက်‌ရ‌သေး‌တော့ မနက်‌ဆို‌တော်‌‌တော်‌နဲ့အိပ်‌ယာမထဘူး။ ကိုယ်‌အိပ်‌တဲ့ခြင်‌‌ထောင်‌နဲ့ ဘီဒိုနဲ့ကကပ်‌‌နေတာ….
ညီမ‌လေးကမနက်‌ပိုင်း‌ကျောင်းသွားဖို့ ‌ရေချိုးပြီးရင်‌ အဲ့နားမှာ ထမိန်‌ရင်‌လျှား‌လေးနဲ့ အင်္ကျီလာလာဝတ်‌တယ်‌။
တခါတ‌လေကိုယ်‌ကနိုး‌နေရင်‌ ခြင်‌‌ထောင်‌ထဲက‌မြင်‌မြင်‌‌နေရတာ‌ပေါ့။ တစ်‌ရက်‌မှာ ဘီဒိုထဲကသူ့ပင်‌တီအနီရဲရဲ‌လေးကို
ဝတ်‌ပြီး ထမိန်‌ကိုအကုန်‌ချွတ်‌ချလိုက်‌တယ်‌။ ပြီး‌တော့ ဘီဒို‌ရှေ့ဒူး‌ထောက်‌ပြီး ဘာရှာ‌နေတာလဲမသိဘူး…ပင်‌တီအနီရဲရဲ‌လေးနဲ့ဖင်‌‌လေးကတင်း‌နေတာ‌ပေါ့‌ဗျာ။ ကျ‌နော်‌လည်း ခြင်‌‌ထောင်‌ထဲက‌နေစိတ်‌‌တွေဘယ်‌လိုဖြစ်‌သွားမှန်းမသိပါဘူး။
အဲ့ဒီမှာ မ‌နေနိုင်‌‌တော့ပဲညီမ‌လေးကဒူး‌ထောက်‌ပြီးထိုင်‌‌နေလို့ ‌ နောက်‌ကိုပြူးထွက်‌‌နေတဲ့သူ့အဖုတ်‌‌ဖောင်း‌ဖောင်း‌လေးကို
အဲချိန်‌မှာ သူကလန့်‌ပြီး‌နောက်‌လှည့်‌ကြည့်‌ရင်း “အကိုကြီး ဘာလုပ်‌တာလဲ” တဲ့… ကျ‌နော်‌လည်း လန့်‌ဖြန့်‌ပြီး ” ‌အော်‌ ‌ဘောင်းဘီ‌လေးလှလို့ အသား‌လေး‌ကောင်းလားကိုင်‌ကြည့်‌တာ”လို့ ‌ကြောင်‌‌ကြောင်‌‌တောင်‌‌တောက်‌နဲ့ ‌ပေါက်‌ကရ‌တွေ‌ပြောလိုက်‌ရတယ်‌။ သူလည်းအလန့်‌တကြားနဲ့ထပြီး ‌ကျောင်းစိမ်းထမိန်‌‌လေး‌ကောက်‌စွတ်‌ကာ ထွက်‌သွား‌လေရဲ့‌ဗျာ…။ ပထမဆုံးဆို‌တော့ မိထွေးနဲ့ပြန်‌တိုင်‌မလားဆိုပြီးလန့်‌လိုက်‌တာ….။ ဒီလိုနဲ့ ‌နောက်‌ရက်‌‌တွေမှာ‌ကြောက်‌ပြီးဘာမှဆက်‌မလုပ်‌ဖြစ်‌ပဲ‌နေ‌နေမိတယ်‌။ ပြန်‌များတိုင်‌မလားဆိုပြီး‌ ကြောက်‌‌နေရတာလဲ‌မောတယ်‌‌ဗျာ..။
ညီမ‌လေးကလည်း ‌နောက်‌ရက်‌‌တွေမှာ ဟို‌နေ့ကလိုမလုပ်‌‌တော့ပဲ ပုံမှန်‌အတိုင်းထမိန်‌ရင်‌လျှားနဲ့ပန်‌တီဝတ်‌ အင်္ကျီဝတ်‌လုပ်‌တာပဲ‌တွေ့ရတယ်‌..။ အဲဒါ‌လေးပဲကြည့်‌ကြည့်‌ပြီး ဖီးလ်‌ယူ…သူသွားရင်‌မှန်းထုရတာအမော‌ပေါ့‌ဗျာ…။
(ကျ‌နော်‌တို့အိမ်‌က အဲ့တုန်းကအခန်း‌တွေသိပ်‌မရှိဘူး‌ဗျ ။ အ‌ပေါ်ထပ်‌မှာ အိမ်‌‌ရှေ့ခန်းရယ်‌.. အတွင်းခန်းရယ်‌ ဒါပဲရှိတာ)
အတွင်းခန်းမှာကုတင်‌နှစ်‌လုံး.. တစ်‌လုံးက ညီမ‌လေးနောက်‌တစ်‌လုံးက အိမ်‌အကူအဖွားကြီးအိပ်‌တယ်‌။
‌ကျ‌နော်‌က အိမ်‌ရှေ့ခန်းကြမ်းပြင်‌မှာ ‌မွေ့ယာခင်းပြီးအိ်‌ပ်‌တာ..။ အတွင်းခန်းကကျဉ်း‌တော့ ဘီဒို‌တွေဘာ‌တွေကိုအ‌မ်‌‌ရှေ့ခန်းကျ‌နော်‌အိပ်‌တဲ့‌နေရာမှာပဲထားတာ။ အ‌မေနဲ့အ‌ဖေက‌တော့ ‌အောက်‌ထပ်‌မှာပဲအိပ်‌ကြတယ်‌။ တစ်‌ရက်‌မှာ‌ပေါ့‌ဗျာ……..ကျ‌နော်‌ညဥ့်‌နက်‌တဲ့အထိအိပ်‌မရဘူး…..‌စိတ်‌ကူးယဉ်‌အ‌‌တွေး‌တွေများပြီးထန်‌‌နေတာ‌လေ…ဟီးးးး
အဲဒါနဲ့ကျ‌နော်‌အိပ်‌ယာထဲကထ ‌ခြေဖွပြီးကြောက်‌‌ကြောက်‌နဲ့ ဟိုဘက်‌အခန်းထဲကိုသွား‌ရော…(အခန်းကတံခါးမရှိဘူး) အခန်းထဲ‌ရောက်‌‌တော့ ညီမ‌လေးကုတင်‌‌ခြေရင်းနားသွားပြီး ဘာဆက်‌လုပ်‌ရမလဲစဉ်းစားရင်းထိုင်‌‌နေမိတယ်‌။ ခဏကြာ‌တော့… ခြင်‌‌ထောင်‌‌လေးအသာမကာ ညီမ‌လေး‌ရဲ့ခြေ‌ထောက်‌‌လေးက‌နေစပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း‌အ‌ပေါ်ကိုတိုးပွတ်‌သွားတာ….စကပ်‌‌လေးထဲ‌ရောက်‌ပြီး သူ့အဖုတ်‌‌လေးကိုပွတ်‌မိတဲ့အထိပဲ…။တော်‌‌တော်‌ကြာပွတ်‌ရင်းနဲ့ ကိုယ့်‌ကျန်‌လက်‌တစ်‌ဖက်‌ကလည်း ကိုယ့်‌ငပဲကိုထု‌နေမိတယ်‌။ အဲ့ဒီမှာ ညီမ‌လေးကတစ်‌ချက်‌တွန့်‌သွားလို့ ခဏငြိမ်‌‌နေလိုက်‌ရတယ်‌။ ကျ‌နော်‌ဆက်‌ပွတ်‌‌တော့ ညီမ‌လေးကထထိုင်‌ပြီး အသံတိုးတိုး‌လေးနဲ့ “အကိုကြီးလား”တဲ့…။ ကျ‌နော်‌လည်း “အင်း”လို့တိုးတိုး‌လေးပဲ‌ပြောလိုက်‌တယ်‌။ သူက”ဟာ…ဟှိုဘက်‌မှာအဖွားနိုးသွားလိမ့်‌မယ်‌” “မနိုးပါဘူးဟာ…ဒီအတိုင်း‌လေးပဲညိမ်‌‌နေ….” “ဟာ…. မရဘူး လုပ်‌နဲ့ သွား‌တော့…” “ဒါဆိုလည်း သွားမယ်‌…ခဏ‌လေးနမ်းချင်‌လို့”ဆိုပြီးကြောက်‌‌ကြောက်‌နဲ့ သူ့ကိုအတင်းဖက်‌ သူ့ပါး‌လေးကိုနမ်းပြီး ပြန်‌ထွက်‌လာခဲ့ရတယ်‌…။
အဲ့ညက‌တော့ ညီမ‌လေးကှိုမှန်းထုပြီးကြိတ်‌မှိတ်‌အိပ်‌လိုက်‌ရတယ်‌‌ဗျာ….။ အဲဒီလိုနဲ့ ‌နောက်‌သုံး‌လေးရက်‌‌လောက်‌ကြာ‌တော့….စ‌နေ‌နေ့လားမသိဘူး ‌ကျောင်းပိတ်‌ရက်‌တစ်‌ရက်‌မှာအ‌ဖေနဲ့အ‌မေကအလှူသွားကြတယ်‌…။ အိမ်‌အကူအဖွားကလည်း အိမ်‌‌အောက်‌ထပ်‌မှာ လုပ်‌စရာရှိတာ‌တွေလုပ်‌‌နေတယ်‌။ ညီမ‌လေးက‌တော့ ထုံစံအတိုင်း မနက်‌ပိုင်း‌အိပ်‌ယာထရေချိုး‌နေကျမို့ ‌ရေချိုးပြီး အင်္ကျီလာလဲ‌ရော…ထမိန်‌ရင်‌လျှားနဲ့ပဲ ဘီဒိုဖွင့်‌ပြီး ပင်‌တီအပြာ‌ရောင်‌‌လေးကို အရင်‌ယူဝတ်‌လိုက်‌တယ်‌…။ ကျ‌နော်‌လည်း ခြင်‌ထောင်‌ထဲက‌နေဘာဆက်‌လုပ်‌မလဲကြည့်‌‌နေတာ‌ပေါ့…။ ပြီး‌တော့ သူကဟိုတခါလို ထိုင်‌ချလိုက်‌တယ်‌…..ကျ‌နော်‌လည်း မ‌နေနိုင်‌‌တော့ပဲ ညီမ‌လေးရဲ့ထမိန်‌နဲ့တင်း‌နေတဲ့တင်‌ပါး‌လေးကိုခြင်‌‌ထောင်‌ထဲကလက်‌ထုတ်‌ပြီးလှမ်းကိုင်‌လိုက်‌မိတယ်‌…။ ဒီတခါသူကလှည့်‌မကြည့်‌ပဲညိမ်‌‌နေတာ… အဲဒါနဲ့သူ့တင်‌ပါး‌လေးကို အသာ‌လေးဆက်‌ပွတ်‌‌ပေးပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်အဖုတ်‌‌လေးနား‌ရောက်‌သွားတာ‌ပေါ့…။
ညီမ‌လေးကညိမ်‌‌နေ‌တော့ ကျ‌နော်‌လည်းအတင့်‌ရဲပြီသူ့အဖုတ်‌‌လေးကိုခပ်‌ဖိဖိ‌လေးပွတ်‌‌ပေးရင်း ထမိန်‌‌အောက်‌ကိုလက်‌ရှိုပြီး အဖုတ်‌‌လေးကိုမရမက အတင်းနှိုက်‌တာ….။ ပင်‌တီ‌လေးကခံ‌နေ‌တော့ ပင်‌တီကို‌ဘေးဆွဲဖယ်‌ပြီး လက်‌ကိုအတင်းထိုးထည့်‌ပြီး သူ့အစိ‌နေရာ‌လေးကို ပွတ်‌‌ပေး‌နေ‌တော့ သူမရုန်းပဲဆက်‌ညိမ်‌‌နေတယ်‌‌လေ။ ကျ‌နော်‌လည်း OKပြီဆိုပြီး ထထိုင်‌လိုက်‌‌တော့တယ်‌။ညီမ‌လေးအ‌‌နောက်‌က‌နေလက်‌တစ်‌ဖက်‌ကအဖုတ်‌‌လေးကိုကိုင်‌ပွတ်‌ တစ်‌ဖက်‌ကထမိန်‌ရင်‌လျှား‌ပေါ်က‌နေပဲ သူ့နို့‌သေး‌သေး‌လေး‌တွေကိုဆုပ်‌နယ်‌‌ပေး‌နေတာ‌ပေါ့….။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညီမ‌လေးက ကျ‌နော့်‌ရင်‌ဘတ်‌ကိုမှီလာတယ်‌‌လေ။ ကျ‌နော်‌လည်း ပါး‌လေးကိုနမ်း ဆံပင်‌‌လေး‌တွေကိုနမ်းရင်း “ချစ်‌လိုက်‌တာ”လို့‌ပြောလိုက်‌မိ‌သေးတယ်‌…။ သူ့ကိုလည်း “ကိုကြီးကို‌ရော ချစ်‌လား”ဆို‌တော့……”ချစ်‌တယ်‌”ဆိုပြီး ပါးကိုပြန်‌နမ်း‌ပေးယ်‌‌လေ…။ဒါနဲ့ညီမ‌လေးကိုထခိုင်းပြီးမျက်‌နှာချင်းဆိုင်‌အတူတူဖက်‌ထားရင်းတစ်‌မိနစ်‌‌လောက်‌‌ထိုင်‌‌နေလိုက်‌ကြတယ်‌…။ ခဏ‌နေ‌တော့ ကိုယ်‌ချင်းပြန်‌ခွာပြီး သူ့ထမိန်‌‌လေးကိုဖြည်‌ချမလို့လုပ်‌‌တော့…..လက်‌နဲ့အတင်းကာထားပြီးဘာလုပ်‌မလို့လဲတဲ့…နို့‌လေး‌တွေစို့ချင်‌လို့ဆို‌တော့အဖွားကြီး တက်‌လာအုံးမယ်‌တဲ့‌လေ…သူတက်‌လာရင်‌ သိသာပါတယ်‌ဟာ ခဏ‌လေးပါလို့။သူကအဲ့ကျမှ လက်‌ကို‌ဘေးချလိုက်‌တာ…..ကျ‌နော်‌လည်း သူ့ထမိန်‌‌လေးကိုဖြည်‌ချပြီးနို့‌လေး‌တွေကုန်းစို့‌တော့ သူ့‌ခေါင်းကို‌နောက်‌လှန်‌ပြီးရင်‌ဘတ်‌ကို‌ကော့‌ပေးထားတယ်‌‌လေ…။
နို့‌လေး‌တွေကိုစို့ရင်း လက်‌တစ်‌ဖက်‌ကပန်‌တီ‌လေး‌ပေါ်က‌နေ အဖုတ်‌‌လေးကိုအသာ‌လေးပွတ်‌ပြီး မှိန်း‌နေတာ တော်‌‌တော်‌ကြာသွားတယ်‌။အဲ့အချိန်‌မှာ အဖွားကြီးက ညီမ‌လေးကို ‌အော်‌‌မေးသံတစ်‌ခုကြားလိုက်‌မိတယ်‌…။သမီး စာကျက်‌‌နေတာလား တဲ့…အဖွား‌ဈေးမှာအချိုမှုန့်‌သွားဝယ်‌မလို့ခြံတံခါးပိတ်‌ခဲ့မယ်‌ အသံနား‌ထောင်‌လိုက်‌အုံးတဲ့…။လန့်‌သွားတာ‌ဗျာ…. ‌ချွေး‌တောင်‌ပျံတယ်‌…. ဟူးးးးးးးကိုယ်‌လည်းအရှိ်‌န်‌က တက်‌‌နေပြီမို့ဘယ်‌လိုဇာတ်‌လမ်းဆက်‌ရမလဲ‌တွေးရင်း…..ညီမ‌လေးလက်‌တစ်‌ဖက်‌ကိုဆွဲယူပြီးကျ‌နော့်‌ဒုတ်‌‌ပေါ်ကိုတင်‌‌ပေးလိုက်‌တယ်‌…ညီမ‌လေးက အ‌သေ‌ကောင်‌ကြီးလိုအုပ်‌ကိုင်‌ရုံပဲကိုင်‌ထား‌တော့မထူးဘူးဆိုပြီး ညီမ‌လေးကို အိပ်‌ယာ‌ပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်‌ပြီးနို့‌လေး‌တွေကိုစို့လိုက်‌ ပါး‌လေးကိုနမ်းလိုက်‌နဲ့အ‌ပေါ်က‌နေတက်‌ခွထားလိုက်‌တယ်‌။
ခဏ‌နေ‌တော့ ထမိန်‌‌လေးလှန်‌ပြီး ဘောင်းဘီချွတ်‌လိုက်‌မယ်‌ဆို‌တော့..မချွတ်‌နဲ့ ဘာလုပ်‌မလို့လဲတဲ့ ….ကျ‌နော်‌လည်း ခဏ‌လေးပဲချွတ်‌ထားလိုက်‌ပါလို့‌ချော့‌ပြောရင်းချွတ်‌လိုက်‌‌တော့တာ‌ပေါ့…..။သူ့ဒူး‌လေးနှစ်‌ဖက်‌ကိုကားပြီးထည့်‌ကြည့်‌မယ်‌‌နော်‌လို့‌ပြော‌တော့ညီမ‌လေးကြောက်‌တယ်‌တဲ့…ဘာမှမဖြစ်‌ပါဘူး ခဏ‌လေးပါညီမ‌လေးရယ်‌ဆို‌တော့ဘာမှဆက်‌မ‌ပြော‌တော့ပဲ မျက်‌စိမှိတ်‌ထားတယ်‌..။ကျ‌နော်‌လည်း အ‌ကြောတပြိုင်းပြိုင်းထခေါင်းတဇက်‌ဇက်‌ညိမ့်‌ပြီးထိပ်‌မှာအရည်‌ကြည်‌‌လေး‌တွေပါထွက်‌‌နေတဲ့ကျ‌နော့်‌ဒုတ်‌ကိုကိုင်‌ထားရင်းအ‌ပေါက်‌‌လေးကိုဖြဲ‌တေ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်‌လိုက်‌တယ်‌…။တစ်‌ဝက်‌‌လောက်‌‌ရောက်‌‌တော့မှညီမ‌လေးထ‌အော်‌တာ‌ဗျာ..လန့်‌လိုက်‌တာ…‌တော်‌‌သေးတယ်‌ အဖွားကြီးမရှိလို့။ကျ‌နော့်‌ဒုတ်‌က‌တော့ ပှုံမှန်‌လှုပ်‌ရှားရင်းအဆုံးထိထိုးထည့်‌လိုက်‌တာညီမ‌လေး‌ကော့ပျံလန်‌သွားလို့ ထပ်‌လန့်‌ရပြန်‌‌ရော။
ပါး‌လေး‌တွေနမ်းရင်းညိ‌မ်‌ပြီးခဏမှိန်း‌နေလိုက်‌ရ‌သေးတယ်‌…။ ညီမ‌လေးအသက်‌ရှူသံ‌‌တွေပုံမှန်‌ပြန်‌ဖြစ်‌သွားတဲ့အထိ‌ပေါ့…။ဖြည်း‌ဖြည်းချင်းအထုတ်‌အသွင်း‌လေးလုပ်‌‌နေရင်း…နာ‌သေးလားညီမ‌လေးဆို‌တော့…နာတယ်‌တဲ့…အဲဒါဆိုခဏ‌လေး‌နော်‌ဆိုပြီးခပ်‌မြန်‌မြန်‌‌လေး‌ဆောင့်‌ရင်းပြီးခါနီးအပြင်‌ကိုဆွဲထုတ်‌လိုက်‌ပြီးအိပ်‌ယာ‌ပေါ်မှာပဲပြီး‌အောင်‌ဆက်‌ထုလိုက်‌‌တော့တယ်‌။ညီမ‌လေးက သူ့ဖင်‌‌လေးကိုဟိုဖက်‌နည်းနည်း‌ရွှေ့လိုက်‌ပြီးကျ‌နော်‌ထု‌နေတာကို စိုက်‌ကြည့်‌‌နေတယ်‌‌လေ…။အရည်‌‌တွေထွက်‌လာ‌တော့ ဘာ‌တွေလဲတဲ့…ဘာမှမဟုတ်‌ဘူးဒီလိုပဲထွက်‌လာတာလို့‌ပြောလိုက်‌တယ်‌…။အဲဒါနဲ့သူဖင်‌ထိုင်‌ထားတဲ့‌နေရာ‌လေးကိုကြည့်‌လိုက်‌‌တော့ အိပ်‌ယာခင်းမှာ‌သွေးစ‌လေး‌‌တွေ….မျက်နှာ‌လေးရှုပ်‌မဲ့ပြီး ‌စပ်‌‌နေတယ်‌တဲ့….သူ့လက်‌က‌လေးကိုင်‌ဆွဲထူပြီး ပန်‌တီ‌ကောက်‌ယူကာလက်‌ထဲထည့်‌‌ပေးလိုက်‌တယ်‌….။ညီမ‌လေး ‌ရေသွားထပ်‌ချိုးအုံးမယ်‌…‌ချွေး‌တွေနဲ့တဲ့….သူထမိ‌န်‌‌လေးပြင်‌ဝတ်ပြီးထသွား‌တော့ကျ‌နော်‌လည်း ပြန်‌အိပ်‌လိုက်‌တာ‌နေ့လယ်‌မှပဲနိုး‌တော့တယ်‌….။
‌နောက်‌တစ်‌‌နေ့(‌တော်‌‌တော်‌ကြာသွားပါတယ်‌)‌နောက်‌တစ်‌ကြိမ်‌ဟို‌နေ့ကလိုထပ်‌ရလာမယ့်ခွင့်‌အ‌ရေး‌တွေ‌စောင့်‌ရင်း ညီမ‌လေးကိုမှန်းထု‌နေရတာလည်း ကြာလာပြီ‌လေ။ညဘက်‌‌တွေ‌ဆို အိပ်‌ယာထဲမှာ တော်‌‌တော်‌နဲ့အိပ်‌မ‌ပျော်‌ဘူးညီမ‌လေးနဲ့ဖြစ်‌ခဲ့ကြတာ‌တွေပြန်‌ပြန်‌‌တွေးရင်းညီမ‌လေးကိုအရမ်းသတိရလာမိတယ်‌။အဲဒါနဲ့ တစ်‌ညမှာ ညီမ‌လေးအိပ်‌‌နေတဲ့‌နေရာကိုကျ‌နော်‌သွားမိတယ်‌‌လေ။အရင်‌တစ်‌ခါလိုပဲညီမ‌လေးရဲ့ကုတင်‌‌ခြေရင်း‌လေးနား‌ရောက်‌‌တော့ခြင်‌‌ထောင်‌‌လေးအသာမ,ပြီးခဏ‌လေးရပ်‌ကြည့်‌‌နေမိတယ်‌။ဟိုဘက်‌ကုတင်‌ကအဖွားကြီးနိုးများလာ‌လေမလား‌‌တွေးရင်း စိုးရိမ်‌စိတ်‌‌တွေနဲ့အတူချွေး‌တွေပါပြန်‌‌နေမိတယ်‌‌ဗျာ…။ဒါ‌ပေမဲ့ ညီမ‌လေးကိုလုပ်‌ချင်‌‌နေတဲ့စိတ်‌က တားမရ ဆီးမရနဲ့ ညီမ‌လေးခြင်‌‌ထောင်‌ထဲကိုပဲတိုးဝင်‌မိ‌တော့တယ်‌။ညီမ‌လေးက‌တော့ အိပ်‌‌မောကျ‌နေတာ‌ဗျာ…ဟောက်‌‌တောင်‌‌နေ‌သေး။အဲဒါနဲ့ကျ‌နော်‌လည်းညီမ‌လေးရဲ့‌ခြေ‌ထောက်‌‌လေး‌တွေကိုပွတ်‌ပြီးအဖုတ်‌‌နေရာ‌လေးကိုမျက်‌နှာနဲ့အပ်‌မိတယ်‌…။
(အဲဒီအချိန်‌က ကျ‌နော်‌တစ်‌ခါမှမလုပ်‌ဖူး‌သေးတဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်‌ခြင်းပါပဲ…ဒါ‌ပေမဲ့ကျ‌နော်‌ဦး‌လေး‌တွေနဲ့ကြည့်‌ဖူးတဲ့ဇာတ်‌ကား‌တွေထဲကအရ)တစ်‌ခါမှမရဖူးတဲ့ Sense တစ်‌ခုကိုရလိုက်‌တယ်‌……အရမ်းသင်းပျံ့တဲ့ရနံ့‌လေးပါပဲ…။‌ကောင်းလိုက်‌တဲ့အနံ့‌လေးပါ‌ဗျာ….အဲ့အချိန်‌မှာ ညီမ‌လေးကတစ်‌ချက်‌တွန့်‌သွားပြီးနိုးလာတယ်‌။ကျ‌နော့်‌‌ခေါင်းကိုတွန်းရင်း “အစ်‌ကိုကြီးလား”တဲ့…အင်း…ဟုတ်‌တယ်‌…””အာ….လုပ်‌ပြန်‌ပြီ….အ‌ဖွားကြားမယ်‌ဟာ”ဆိုပြီးအသံတိုးတိုး‌လေးနဲ့‌ပြောလာတယ်‌။”မကြားပါဘူးဟာ…ခဏ‌လေးပါ..ဒီ‌နေရာကကြားမှာစိုးရင်အစ်‌ကိုကြီးအခန်းဘက်‌သွားရ‌အောင်‌”ဆိုပြီး သူ့လက်‌က‌လေးဆွဲ‌ခေါ်လာမိတယ်‌။သူလည်း အသာ‌‌လေးထလိုက်‌လာတယ်‌‌လေ….။ကျ‌နော်‌လည်း အ‌ဖွားနိုးလာမလားစိုးရိမ်‌စိတ်‌နဲ့ ကြောက်‌‌တော့‌ကြောက်‌တာ‌ပေါ့‌ဗျာ။အဲဒါနဲ့ကျ‌နော့်‌အိပ်‌ယာ‌ပေါ်‌ရောက်‌လာ‌ရော…ညီမ‌လေးက” ဖြစ်‌ပါ့မလား”လို့မေးတယ်‌…။”ခဏ‌လေးပါ‌နော်‌..ဖြစ်‌ပါတယ်‌”လို့‌ပြော‌တော့ညီမ‌လေးကစပြီး ခြင်‌‌ထောင်‌ထဲမှာပဲကျ‌နော့်‌ကိုစဖက်‌ပါ‌လေ‌ရော…။ကျ‌နော်‌လည်း ခပ်‌တင်းတင်းပြန်‌ဖက်‌ထားရင်း”အိုး…ညီမ‌လေးရယ်‌”ဆိုပြီး သူ့ပါး‌လေး‌တွေနမ်း…အင်္ကျီ‌ပေါ်က‌နေနို့‌လေး‌တွေဆုပ်‌ကိုင်‌ပွတ်‌နယ်‌‌ပေါ့‌လေ…။
ညီမ‌လေးလည်း ကျ‌နော့်‌လိုပဲပြန်‌ဖက်‌ရင်းအသက်‌ရှူသံ‌တွေပြင်း‌နေ‌လေရဲ့ ….။”အရမ်းချစ်‌တယ်‌ကိုကြီးရယ်‌”…..ကျ‌နော့်‌မှာ ထန်‌ပြီးရင်းထန်‌ရင်း…ပါး‌လေး‌တွေနမ်း…နို့‌လေး‌‌တွေနယ်‌ရင်း…”ချစ်‌လိုက်‌တာညီမ‌လေးရယ်‌…”ဆိုပြီးအတင်း‌ပြောရတာ‌ပေါ့….။ပြီး‌တော့…ညီမ‌လေးကိုလှဲချပြီး…အင်္ကျီ‌လေးလှန်နို့‌လေး‌တွေကိုတစ်‌ဖက်‌ပြီးတစ်‌ဖက်‌အငမ်းမရစို့…”ညီမ‌လေး ..‌.‌ ကောင်း‌နေလားဟင်‌ …”ဆို‌တော့”ဘယ်‌လိုကြီးလဲမသိဘူး”တဲ့…ညည်းသံ‌လေးနဲ့တိုးတိုး‌လေး‌ပြောရှာတယ်‌…။အဲဒါနဲ့…သူ့‌ခြေ‌ထောက်‌‌လေးနှစ်‌ဖက်‌ကိုမရင်းသူ့အဖုတ်‌ပေါက်‌‌လေးပြဲအာ‌နေတဲ့‌နေရာကိုမှန်းပြီးကျ‌နော့်‌ဒုတ်‌နဲ့ထိထားလိုက်‌တယ်‌။အရည်‌‌တွေစို‌ရွှဲနေတဲ့ ညီမ‌လေးအဖုတ်‌‌ရဲ့အ‌ပေါက်‌‌နေရာတည့်‌သွား‌တော့ဒုတ်‌ကိုဖြည်းဖြည်း‌လေးအဆုံးထိထိုးထည့်‌ရင်း ညီမ‌လေးအ‌ပေါ်‌မှောက်‌ပြီးအသာ‌လေးမှိန်းထားလိုက်‌တယ်‌။”အားးးးး အကိုကှီး””ညီမ‌လေး ..အရမ်းနာလို့လား…””ဟို‌နေ့က‌လောက်‌‌တော့ မနာဘူးကိုကြီး…ဒါ‌ပေမယ့်‌ တမျိုးကြီးပဲ…””ဒါဆို ကိုကြီးမလုပ်‌‌တော့ဘူး”ဆို‌တော့…”အကိုကြီး‌ကောင်းတယ်‌…လုပ်‌…လုပ်‌..”အဲဒါနဲ့‌တော်‌‌တော်‌ကြာတဲ့အထိ‌ဆောင့်‌ရင်းလုပ်‌လိုက်‌တာ….ပြီးခါနီးမှ အပြင်‌ဆွဲထုတ်‌ပြီးသူ့‌ဗိုက်‌‌လေး‌ပေါ်ပန်းထုတ်‌လိုက်‌ရတယ်‌…။အရည်‌‌တွေကုန်‌‌တော့မှ…..”ချစ်‌လိုက်‌တာညီမ‌လေးရယ်‌….”ဆိုပြီး ပါး‌လေး‌တွေ နှုတ်‌ခမ်း‌လေး‌တွေနမ်း‌ပေးပြီး သူ့လက်‌က‌လေးဆွဲထူ‌ပေးလိုက်‌‌တော့သူ့အိပ်‌ယာထဲပြန်‌သွား‌တော့တယ်‌………..။ပြီးပါပြီ….။
👉ရွာသူလေး 👈 စ/ဆုံး